U-Orlando Gutierrez, uMbhali kwi-Funda ukuRhweba
umbhali: UOrlando Gutierrez
IGolide iphinda ivavanya ilahleko ezaphukileyo zangaphambili
NgoMvulo, Novemba 1, 2021
Ukuchasana okuPhambili: 1787 Inkxaso ePhambili: 1779 - 1772 Igolide yayineseshoni ye-bearish yangoLwesihlanu ihla -1.60% ukusuka kwi-lows yeveki ukuya kwi-lows ye-Fridays yokuqhawula kunye nenqanaba eliphambili eliphambili (1787). Ngoku irholile ukuphinda ivavanye lo mgangatho wophukileyo kanye ngelixa ishicilela ipateni yokuqhubeka. Umbono wam wokurhweba kuku […]
INkxaso ePhambili: 156.00 - 155.75 Ukuchasana okuPhambili: 157.00 - 158.20 Emva kokuphuma kwinqanaba le-156, i-GBPJPY ihlehlise i-1.65% ukusuka kwi-highs yenyanga edlulileyo ukubuyisela le nqanaba langaphambili eliphukileyo ngamaxesha e-3 ngelixa ushicilela iphethini yokuqhubeka ecacileyo. I-JPY isathengiswa kakhulu apha kodwa ngoku ikwakhona […]
Igolide ifumana ibhidi yokulahlwa kwedatha yokunyuka kwamaxabiso e-US
NgoLwesihlanu, Oktobha 29, 2021
Inkxaso engundoqo: 1792.50 - 185.90 Ukuchasana okuphambili: 1809.20 Igolide iye yarhweba kwibala elichazwe kakhulu ukususela ekubeni yaphuka kwinqanaba le-1787 ngoLwesihlanu odlulileyo. Eli nqanaba libeka i-downside kule marike. Ukujonga kwisenzo samaxabiso embali, eli nqanaba laliYISISEKO kulo lonke uJulayi kwaye ibe yeyona nto ibalulekileyo […]
IRandi yoMzantsi Afrika isaqhubeka nokuhla
NgoLwesithathu, Oktobha 27, 2021
INkxaso ePhambili: 14.80 Ukuxhathisa okuPhambili: 15.08 – 15.20 IRandi ibikhe yantlitheka kakhulu xa ithelekiswa neUSD kwiveki ephelileyo. Oku ayisiyiyo intshukumo eqhutywa yi-USD kuba sibone ukurhweba okungekho mkhombandlela kwiiveki ezimbalwa kwi-USD. Le yi-rally eqhutywa yi-ZAR kwi-USDZAR (ukwehla kwexabiso le-ZAR). […]
Idiphu ye-USDZAR ithenga kwi-pivot yeveki
NgoLwesibini, Oktobha 26, 2021
Inkxaso engundoqo: 14.65 Ukuchasana okuPhambili: 14.90 Ndikhangela i-USD inde kwi-DXY ukuguqulwa emva kokuvavanywa kwakhona kwe-Agasti ephezulu. I-USDZAR inika ithuba elihle kakhulu apha. Emva kokuphulwa kwinqanaba le-14.68 kwiveki ephelileyo kunye nokubambisa iifutshane i-USDZAR idonse umva kweli nqanaba. Le yimbali ephambili ye-MASSIVE […]
Inkxaso engundoqo: 156.00 - 156.40 Ukuchasana okuPhambili: 157.40 - 158.20 I-GBP iye yaxabisa i-6.25% ngokumelene ne-JPY kwi-bearish breakout enkulu kwicala le-JPY Yen kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo. Inqanaba elalifakela phezulu kule marike yayiyi-156.00 (i-Jan. 2021 highs). Nje ukuba i-GBPJPY iqhekeze ngesakhiwo sokubuyela umva […]
Igolide ebambe ngaphezulu kwe-11780
NgoLwesibini, Oktobha 19, 2021
Inkxaso ephambili: 1775 Ukuchasana okungundoqo: 1790-1800 Emva kwentshukumo yangoLwesihlanu odlulileyo (-2.17%) Igolide iqokelelene ukusuka kwindawo eQinisekileyo (1745-1760) ukuya phezulu kuluhlu lweveki ephelileyo ngelixa ithengisa ngaphakathi kwisakhiwo esinee-bearish. I-DXY i-bearish kakhulu ngalo mzuzu kwaye kufuneka izise uxinzelelo lwe-bullish kwi […]
I-USDMXN NGENQANABA EBALULEKILEYO
NgoMvulo, Oktobha 18, 2021
Ukuchasana okuphambili: 20.50 - 20.60 Inkxaso ephambili: 20.31 NgoLwesihlanu ophelileyo, emva kwexesha kwi-NY yorhwebo iMXN iqale ukuhlangana nzima ngokuchasene ne-USD ukusuka kwiindawo eziphakamileyo zosuku. Ngexesha le-rally i-USDMXN yaphazamisa i-1.35% yaphula nge-Agasti ephezulu kwinkqubo. Iindawo eziphakamileyo zika-Agasti ziindawo eziphakamileyo ezaphukileyo zangaphambili emva kwereyali enkulu […]
I-GBPUSD izama ukuphakama kweveki ephelileyo
NgoMvulo, Oktobha 11, 2021
Ukuchasana okuphambili: 1.3670 Inkxaso ephambili: 1.3615 - 1.3520 - 1.3440 I-GBPUSD yehle i-3.60% (500 pips) kwinyanga ephelileyo (ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Le ntshukumo yi-1.93% yokutsalela impembelelo yokugqibela ezantsi kunye ne-258% yokubuyela umva […]
Iinkunzi ze-GBPUSD zityhala kwinqanaba eliphambili
NgoLwesibini, Oktobha 5, 2021
Ukuchasana okuphambili: 1.3620 - 1.3660 - 1.3700 Inkxaso ephambili: 1.3580 Izolo kumdlalo wam obukhoma ndithethe ngenqanaba eliphambili lePound elithengisa ngalo ngokuchasene neDola yaseMelika. Makhe sithethe kuqala malunga nolwakhiwo olufutshane ukuya embindini kule marike. Ukusukela phakathi kuSeptemba ukuphakama i-GBP yehle nge-3.6% xa kuthelekiswa ne […]